MAQAAL: Maxaa u qabsoomay Dowladda sanadka dhamaaday ee 2017? | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA MAQAAL: Maxaa u qabsoomay Dowladda sanadka dhamaaday ee 2017?
MAQAAL: Maxaa u qabsoomay Dowladda sanadka dhamaaday ee 2017?
Inkastoo ay badan yihiin waxyaabihii u qabsoomay Dowladda, balse waxaan halkaan ku soo bandhiheynaa qoraal kooba oo aan kaga hadlayno waxyaabihii u qabsoomay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
F.G: haddii aan wada sheegin dhammaan waxqabadka Dowladda, waa ka cudur-daaraneynaa.
Previous articleGuddiga Difaaca Golaha Shacabka oo ka hadlay Darbiga Kenya ka dhisayso xadka Soomaaliya
Next articleMareykanka iyo Iiraan oo is dhaafsaday hadalo kulul ee ku aadan dibadbaxyada ka socda Iiraan